बबरमहलको सडकमा उभिएर एक मित्रलाई पर्खिरहेको छु । गर्मी मौसम काठमाण्डौं सहरमा धुलोमो रजाईँ चल्न थालेको छ । मुखमा कपडाको बिर्काे लगाएर मान्छेहरु हिँड्न लागेका देखिन्छन् । सडकमा थुपारिएको फोहोर समयमा उठाउन नसक्ता त्यसले दिने दुर्गन्धले धेरै व्यस्त सहरमा रुपान्तरण हुन लागिरहेछ । बागमती र अन्य नदीहरुको पानी र नालाजस्तै दुर्गन्धित छ । पुल तर्न लाग्दा नाक थुन्नै पर्छ । प्रत्येक हिंड्ने मान्छेलाई तर्साएर थुप्रिएको हुन्छ । त्यस दिन साथीको बाटो हेर्दै कयौं पटक मोबाइलमा नम्बर दामेर दिक्क भएको थिएँ । जतिखेर पनि सुइच अफ भन्थ्यो । बिहान समय मिलाएको थिएँ दिनको ११ बने यही ठाउँमा भेट्ने भनेर । पर्खन नमीठो हुन्छ । घडीको सुइ ढिलो घुमेजस्तो लाग्छ । दिकदारी र छटपटाहट हुन्छ । बाटो हेर्दाहेर्दै अँँखा टट्टाउँछन् । उसलाई दिएको समय उम्किसकेको हुन्छ ।
सडकको फराकिलो ठाउँमा एउटा टेक्सी रोकिन्छ घ्याच्च भएर । तीनजना मानिस ओर्लन्छन् । नजिकै म छु । उनीहरुमा मेरो आँखा पर्छन् । अगाडीको सिटबाट एउटा त्यस्तै ३५÷३६ को युवक उत्रन्छ, पछिल्लो ढोका खोलेर, एकजना रोगीलाई झार्छ, उसले गाडीबाट ।
अन्तिममा एउटी युवती ओर्लिन्छे । बुढौतीमा प्रवेश गर्न लागेको त्यो रोगीलाई साथको युवाले दाहिने पाखुरामा समातेर हिँडाउन थाल्छ । त्यो रोगीका अनुहारमा मेरा आँखा दौडिन्छ । ऊ त चन्द्रमान पो रहेछ । निदाउरो अनुहार ऊ नजिम गएर उभिन्छ । ऊ मसँग बोल्न चाहेर पनि बोल्न सक्तैन । आँखा फर्काएर मलाई टुलुटुलु हेर्छ मात्र । मलाई उकुसमुकुस हुन्छ । म उ सँग बोलन चाहान्छु । उसलाई डो¥याउने व्यक्तिलाई सोध्दछु । उसलाई चिनेर पनि बुझ पचाएर सोभ्दछु ‘उहाँ चन्द्रमानजी होइन ?’ ‘हो’–सँगैको डो¥याउने साथीले भन्छ ।
इस्तो बिरामी मान्छेलाई किन लिएर हिडेको त प्रश्न गर्छु उसलाई ? साथै हिँड्ने महिलाले भन्छिन् गाडीमा राखेर ल्याएको एउटा कागतमा सहीछाप गराउनु छ, अदालतमा । त्यो कागतमा सहि गरेपछि गाडीमा चढाएर घर लगिहाल्छौं । एक मिनेट पनि उहाँलाई एक्लै छाड्दैनौ । उनीहरुको वकिल समयमा कार्यकक्षमा आइ नपुगेकोले उनीहरु चिया पसलको बेञ्चमा थचक्क बसे । मैले एकपल्ट नजिकै गएर चन्द्रमानलाई सुमसुम्याएर भनें । तिमिलाई सामान्य मधुमेहको सिकायत भनौ लक्षण थियो । यो प्रेसरको रोगले कहिलेदेखि छायो त ? सखाप भएछौ । तिम्रो शरिर साटेर ल्याएजस्तो भएछ । हातगोडा सुकेछन् । रोगले गाँजेपछि मानव शरीर कमजोर हुन के बेर र ?
चन्द्रमान मेरा माया र श्रद्धाले भावुक भयो । मैले आफ्नो दायाँ हातले उसको शरीर सुमसुम्याइरहें निकै बेरसम्म । आँखा रसिला पार्दै भावुक स्वरमा उसले भन्यो –‘शरीर र मानसिक सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने धेरै रोगले झम्टदो रहेछ मलाई धेरै समस्याले एकेसाथ हमला ग¥यो । त्यसकारण मेरो यो हविगत यस्तो भएको हो ।’ साथको युवाले मुख थुन्यो र बोल्न बन्द गराइयो । आफ्ना हातको हत्केलो दुवै ओठमा लगेर राख्यो र चुप लाग्न आग्रह ग¥यो ।
मैले , दुवै उसका सहयोगी पुरुष र महिलासँग परिचय मागेँ । मेरो नाम नन्दराम म उहाँको भानिज । आफ्नै दिदीको छोरा । यी बैनी उहाँको जेठी छोरी नम्रता–भनेर बतायो ।
म चन्द्रमानलाई सुमसुम्याउन छाडेर ती दाजु बैनीसँग गाफिन थालेँ । ‘मेरो घर पनि पूर्वी नेपाल हो । चन्द्रमान जी मेरो पुरानो दास्ती हो । कुनै बेला हामी एउटी सहरमा बस्तथ्यौं । म पत्रकारिता गर्दथें । उहाँ एउटा माविमा पढाउनु हुन्थ्यो । दिनमा धेरैपल्ट उहाँको र मेरो भेटघाट हुन्थ्यो । नजिकै हाम्रो डेरा थियो । म परिवारसहित बस्तथें । उहाँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो । म उहाँको घरमा पनि पुगेको छु । यी छोरीहरु सानै थिए । मलँर्य यिनीहरुको अनुहार झटट् याद आउँदैन, भेरै वषृ बितेर गए । भन्द्रमानसँग मेरो तीनवर्ष अघि एउटा मेनपावर (मान्छे विदेश पठाउने ठाउँमा भेट भएको थियो । एकजना परिवारको सदस्यलाई बाहिर पठाउने सोंच बनाउको छु । रकम पुगेको छैन भनेर भन्थे उनी । आज तीन वर्षपछि भेट्दा उनलाई यो हालतमा पाए अचम्म लाग्यो।’
‘पारिवारिक विपत्ति र समस्याका कारण उहाँलाई यो प्रेसर रोगले चाप्यो । उहाँ मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई तीन महिना एउटै ओछ्यानमा पल्टाएर राख्यौं । गुहु–मुत एकै ठाउँमा भयो । पहिलेको अनुपातमा केही ठीक भएको छ । उहाँको त एकपल्ट कानबाट रगत पनि गयो । डाक्टर भन्थ्यो, यदि कानबाट रगत नगएको भए उहाँ सदाका लागि निदाई सक्नुहुन्थ्यो । रगत कानबाट गएकै कारण बाँच्नुभयो । अव केही समय परेर गरेर बस्न सक्नुभयो भने उहाँलाई सिमेन्टमा पछारे पनि केही हुँदैन । डाक्टरले भने जस्तै विशेष ठीक हुँदै आएको छ । भान्जाले बिस्तारपुर्वक भने । उनकी जेठी छोरी नम्रता मौनता साँधेर घोत्लिरहेकी थिई । घरी–घरी ठूला आँखा फर्काएर वरपर हेर्थी मात्र ।
यसैबीच उनीहरुको वकिल आइपुगे । चन्द्रमानलाई डो¥याएर अदालतभित्र प्रवेश गराउन लगे । अदालतमा आएर सहिछाप गर्नुपर्ने अदालतका कर्मचारीको राहवरमा त्यो कुन त्यसतो कागत हो मलाई जानकारी भएन । शायद यही अदालतमा गराएको कागतका कारण पैतृक सम्पत्ति बिक्रि गर्ने आधार पो तयार गराइएको हो कि ? भन्ने मेरो दिमागमा कुराहरु उब्जिए ।
चन्द्रमानलाई अदालतभित्र प्रवेश गराएपछि उसका भान्जा र छोरी पनि उतै लागे । मलाई यस ठाउँमा पर्खाउने साथीलाई फेरि पोन बजाएँ । यसपल्ट उसले फोन उठायो र भन्योे ‘म शिक्षा मन्त्रालयमा छु तिमि पर्ख एक घण्टापछि मात्र म आइपुग्छु केदार’ मलाई रिस पनि उठ्यो तर मनको एक कुनामा दया पनि पलायो । बिचरा जनता र इष्टमित्रको कामा दौडधुप गर्दैछ । म मुरमुरिएर अत्तालिएर हुन्छ के र भनेर मन बुझाएँ । एक घण्टा केदारलाई यत्रो पनि पर्खन सक्तिन भनेर मनमा कुरा खिपेँ । यदि छिट्टै चन्द्रमानको काम भएँछ भने उसैको घरमा जान्छु, ट्याक्सी चढेर साथै भनेर योजना बुनें दिमागमा ।
दामी मूल्यको कपडा किने पनि चिटिक्क परे हिँड्न नजान्ने भ्याङल्याङ सर्ट र पाइन्ट भिर्ने बानी परेको थियो चन्द्रमानको । उमेर झण्डै साठीको नजिक थियो । तील चामले केश चौडा निधार मिलेको हंश मुख अनुहार । कुनै बेला पोटिला र राता गाला भए पनि अहिले भने चाउरिएका गाला थिए । पातला दारी ठाडा जुँगा पाल्ने बानी परेको अहिले पनि जुँगा कैंचीले मुठारेको मात्र छुरा नलगाएको जुँगा मैलो सर्ट र दाग लगाएको फुस्रो पेन्ट भिरेको थियो उसले । मुखभरी दाँत थिए । खैनीले दाग पारेको गिजा कैलेटी परेका ओठमा थियो आज ऊ । बाँकी………